RASMI: Go'aan Kale Oo Cusub Oo Ka Soo Baxay Kiiskii Baadhitaanka UEFA Ee Man City. - Gool24.Net
RASMI: Go’aan Kale Oo Cusub Oo Ka Soo Baxay Kiiskii Baadhitaanka UEFA Ee Man City.
Xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA ayaa heer kale u qaaday kiiskii baadhitaanka ee Man City kaga socday in ay jabiyeen sharciga dhaqaale wanaaga Yurub.
Kadib markii ay UEFA hore u shaacisay in ay wado baadhitaano la xidhiidha sirihii uu Football Leaks kashifay ee ay Man City fadeexada ku dhex gashay, waxay hadda UEFA ku dhawaaqday in kiiskii baadhitaanka ee City loo wareejiyay waaxda garsoorka ee UEFA.
War saxaafadeed ay hadda UEFA soo saartay ayaa lagu sheegay in guddida maamulka sharciga dhaqaale wanaaga ee CFCB ay baadhitaankoodii soo gaba gabeeyeen isla markaana ay arinta ku wareejiyeen golaha garsoorka ee CFCB.
Warka ay hadda UEFA ka soo saartay baadhitaankii Man City ayaa lagu yidhi: “Gudoomiyaha baadhitaanka guddida maamulka dhaqaale wanaaga kooxuhu waxa kadib markii uu la tashaday xubanaha golaha madaxa banaan ee baadhitaanka CFCB uu maanta go’aan ku gaadhay in uu Manchester City FC uu gudbiyay golaha garsoorka CFCB kadib gaba gabayntii baadhitaanka”.
Qoraalka UEFA ayaa la sii raaciyay: “Golaha baadhitaanka CFCB waxa uu Manchester City FC baadhitaanka ku bilaabay March 7,2019 ee suurtogalnimada in ay jabiyeen sharciga dhaaale wanaaga ‘Financial Fair Play (FFP)’ kuwaas oo ay warbaahin badani dadka u soo bandhigeen”.
“UEFA wax faah faahin dheeraad ah kama bixinayso arintan ilaa golaha garsoorka CFCB ay ku dhawaaqayaan go’aanka”.
Manchester City ayaa niyadjab ka muujisay in kiiskoodii baadhitaanku ku socday loo gudbiyay golaha garsoorka UEFA kuwaas oo ay hadda arintu hortaalo si ay go’aan rasmi ah uga gaadhaan.
Manchester City ayaa hadda filaysa in ganaax culus gadhka loo galin doono iyada oo waliba la filayo in laga ganaaxi doono tartanka Champions League.
Man City ayaa hore ganaax lacageed £49 milyan gini ah loogu xukumay sanadkii 2014 kii iyada oo waliba markaas la xadiday ciyaartoydii ay Champions League kala qayb galaysay.
Man City ayaa waayi karta booskeeda Champions league ee ay u soo baxday inkasta oo la sugayo nooca ganaaxa ay UEFA saari doonto kooxda Etihad Stadium ka dhisan balse hadda kiiska ayaa gaadhay heer la sugayo kaliya go’aankiisa.
Laakiin sidoo kale Man City ayaa halis ugu jirta in ganaax culus laga saaro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee lagu eedeeyay in ay sharcigii dhaqaale wanaaga kooxaha Yurub ku jabisay.